Soo-saareyaasha Blind Rivet Factory - Soo-saareyaasha Blind Rivet Standard, Alaab-qeybiyeyaal
Aluminium Aluminium Dhoobo Madaxa Indhoole
Aluminium dome indho-beelka indhaha waa nooc adag oo nooc cusub ah oo xiraha codsiyada kala duwan.
Ka samaysan aluminium tayo sare leh, waligeed ma daxasho, wuxuu leeyahay caabbinta daxalka wanaagsan, Waa adag tahay, khafiifsan tahay, oo waari kara.
Wareegyadu waa joogto, dhejisyo aan dun lahayn oo isku xidha walxaha. Waxay ka kooban yihiin madax iyo shaashad, taas oo ay ku habboon tahay qalab lagu rakibo feeraha meesha. Rivets indhoolayaasha ayaa sidoo kale leh mandrel, kaas oo ka caawiya gelinta rivet iyo jabaya ka dib gelinta.
Dome Head Blind Rivet ahama Steel
Rivets-yadaani waxay ka samaysan yihiin Bir Dahab ah oo Tayo Sare leh oo ka mid ah noocyada ugu sarreeya ee caabbinta daxalka, taas oo ka dhigaysa inay ka sii dheeraato qalabka kale ee suuqa yaalla maanta.
Qalabkayagu waa mid aad u adag oo ku fiican isticmaalka gudaha iyo dibaddaba. Rivets ahama waa ka sarreeyaan birta caadiga ah waxayna bixiyaan caabbinta miridhku aadka u wanaagsan ee codsiyada biyaha cusbada.
Badeecadani waa daah furan oo indho la'aan ah. Alaabtayada wax bur bur ma leh. Madaxa ciddiyaha ayaa dhameystiran, siman oo toosan. Saamaynta riveting waa wanaagsan tahay qaabdhismeedkuna waa mid is haysta. Shayga waa daxalka u adkaysta, miridhku oo waara. Waxay leedahay noocyo badan oo codsiyo ah.
Dome Head Blind Rivet oo leh rinji midab leh
Waxay bixisaa awood isku dhafan oo lagu xiro badeecada inta lagu gudajiro iyadoo la xoojinayo muuqaalkiisa. Hal dariiqo oo lagu hagaajin karo ama lagu qaabeyn karo muuqaalka rivet waa in lagu daro midab adigoo rinjiyeeynaya. Alaabtayadu waxay ku habboon tahay noocyo badan oo codsiyo ah oo midab lagu daro ama la midoobo.
Wax soo saarkayagu waa ku fiican yihiin shaqaynta, way fududahay in la badbaadiyo, oo si adag ayaa loo xakameeyaa tayada. Waxay leedahay dusha sare ee siman, iska caabbinta daxalka, culeyska wanaagsan iyo cadaadiska adag.
Bir Buuxda CSK Head Blind Rivet
Waxaan nahay hogaamiyaha soo saaraha xirfadle ah ee rivets indha la 'ee Shiinaha, waxyaabaha our waa ku fiican yihiin in shaqo, fudud si loo badbaadiyo, iyo si adag loo xakameeyo tayada. Waxay leedahay dusha sare ee siman, iska caabbinta daxalka, culeyska wanaagsan iyo cadaadiska adag. Saamaynta riveting waa wanaagsan tahay qaabdhismeedkuna waa mid is haysta.
Bir Daxal Leh Oo Buuxda CSK Head Blind Rivet
Muraayadda ka soo horjeedda waa qayb ka mid ah oo ay ku khaldantahay cilladdeeda ama isku xirnaanta faragelinta. Qaab-dhismeedkan waxaa badanaa loo adeegsadaa codsiyada halka dusha sare uu siman yahay oo siman yahay, sida dusha qalabka.